kaunglay on Thu Mar 31, 2011 11:55 pm
ကြားဖူးနားဝလေးတွေ ... ပုံပြင်လေးတွေပေါ့...
ဖတ်ပီး ရယ်ရင်နဲ့ ဘဝအမောလေးတွေပြေမယ်ဆိုရင်....
kaunglay on Thu Mar 31, 2011 11:56 pm
ကုမ္ပဏီအကြီးအကဲ .. ကိုတေဇတစ်ယောက် တောင့်တောင့် ချောချော အတွင်းရေးမှူးမ
တစ်လကျော်ကြာလာသောအခါ ရင်းနှီးလာပြီး .. သူမသည် တောင့်တင်းချောမောလှပ
ရုံမျှမက လျပ်တပျက်ဟာသညဏ်လည်း ထက်မြက်ကြောင်းကို သိလာရသည်။
တစ်နေ့ ကိုတေဇတစ်ယောက် .. ရေအိမ်မှထွက်လာပြီး … အတွင်းရေးမှူးမ၏
စားပွဲရှေ့တွင် မတ်တပ်ရပ်လျက်ကပင် တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ရန်များ
ညွှန်ကြားပေးနေသည် .. .. .. ပြောလိုရာများပြောဆိုညွှန်ကြာြး
ပီးနောက် .. မိမိစားပွဲသို့ ပြန်ရန်ဟန်ပြင်လိုက်စဉ် .. ….
အတွင်းရေးမှူး “ ဆရာ … ဟိုလေ .. ဆရာ့ စစ်တန်းလျားတံခါးကြီးပွင့်နေတယ်
ရုတ်တရက်သဘောမပေါက်သော ကိုတေဇက .. …. ..
“အမ် … ဘယ်စစ်တန်းလျားလဲ ညလေးရဲ့”
အတွင်းရေးမှူး “တိုက်ပွဲမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာ စစ်တန်လျားတံခါးကြီး ပွင့်နေလို့ပါဆရာ”
တစ်တောင်လောက်ပြမှတော့ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တေဇပဲ ဘယ်ရမလဲ .. သဘောပေါက်သွားကာ
ရေအိမ်မှအထွက် ပြန်မတပ်ဖြစ်ခဲ့သော ဘောင်းဘီဇစ်ကို ခပ်ရှက်ရှက်နှင့်ပင်
ပြန်တပ် လိုက်သည်။ အခြေအနေပေးတုံး အသစ်ကလေးသဘောကိုလည်း
အကဲစမ်းချင်နေသော ကိုတေဇက သွေးတိုးစမ်းသလိုမေးလို်က်သည်။
ကိုတေဇ “ ဟိုလေ … ညလေး မြင်လိုက်တုံးက စစ်တန်းလျားမှာ သတိအနေအထားနဲ့
စောင့်နေတဲ့ စစ်သားတစ်ယောက်ရော မြင်လိုက်မိသေးလား”
ဟာသညဏ်ရွှင်သော အတွင်းရေးမှူးမလေး၏ အဖြေကြောင့် ကိုတေဇတစ်ယောက် ..
အတွင်းရေးမှူး “မြင်လိုက်ပါတယ်ဆရာရယ် .. ... ဒါပေမဲ့ စစ်သားတော့မဟုတ်ဘူး ..
မသန်မစွမ်း ဒုက္ခသည်တစ်ယောက် ကုန်ခါနီး ရိက္ခာထုတ်နှစ်ထုတ်ပေါ်မှာ
မသေမရှင်လဲကျနေတာပဲ တွေ့လိုက်တာ …”
“ သေဟ ..”
A Girl Can Change Your Goal!!!
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:08 am
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:10 am
1 . (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်)
Men: ငါတို့ ညစာအတွက် ဘာကို စီစဉ်သင့်လဲမသိဘူးနော်.?
Women: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ရှင်ရယ်...
Men: မက်ဆီကိုအစားစားလေးများ မစားချင်ဘူးလားကွာ..?
Women: ဟင်အင်း..ဟင်အင်း..ကျမတခါစားဖူးတယ်..အဲနောက် မျက်နှာမှာ အဖုတွေတခါတည်း ထွက်လာတော့တာပဲ..
Men: ကောင်းပြီးလေ..ဒါဆိုလည်း..တရုတ်စားလေး စားကြတာပေါ့..
Women: ရှင်...မနေ့ကလည်း ဒါပဲ.. ဒီနေ့လည်း..အဲဒါပဲလား..ကျွတ်.?
Men: အင်..... ပင်လယ်စားဆိုရင်တော့ရော..
Women: ဟင်..ပင်လယ်စားတွေက မကောင်းပါဘူးရှင်ရယ်...၀မ်းတွေ လျှောတက်ပါဘိနဲ့..
Men: အင်..ဒါဆိုရင် မင်း ဘာစားချင်သလဲ ပြောပြလေ..?
Women : ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်..ရပါတယ်ရှင့်...
Men: အင်း..ဒါဆို..ငါတို့ ဘာလုပ်ကြမလဲကွာ..?
Men: ဇာတ်ကားလေးများ မကြည့်ချင်ဘူးလား.. ကိုယ်တို့ မကြည့်တာ အတော်ကြာနေပြီထင်တယ်..
Women: ဇာတ်ကားကြည့်တာ မကောင်းပါဘူးရှင်ရယ်..အချိန်ကို သက်သက်ဖြုန်းနေကြတာပါ..
Men: ဒါဆိုလည်း.. ဘိုးလင်းသွား လိမ့်ကြမလား.. လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တာပေါ့..?
Women: ဒီလို ပူလောင်နေတဲ့နေမှာ ရှင်က ......?
Men: အင်း... လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားပြီ တခုခုများ သောက်ကြမလား..
Women: လက်ဖက်ရည် ဖြတ်ထားတယ်ရှင့်...
Men: အင်း..ဒါဆိုရင် မင်း ဘာလုပ်ချင်လဲ ပြောကြည့်လေ..?
Women: ဘာပဲ လုပ်လုပ် ..ရပါတယ်ရှင်...
3. (ရှင် ဆုံးဖြတ်ပါ.)
Men: ဒါဆိုလည်း..အိမ်ပဲ ပြန်ကြမလား?
Women: ရှင်ပဲ ဆုံးဖြတ်ပါ..
Men: အိုကေ.. ဘတ်(စ)ကားစီးကြတာပေါ့.. အတူတူးစီးမယ်လေ..
Women: အဲဒီကားတွေက ညစ်ပတ်ပြီး အမြဲတမ်း ကြပ်သတ်နေတာပဲ..မကောင်းပါဘူး...
Men: ဟုတ်ပါပြီ.. တက္ကစီပဲ ငှားလိုက်ပါမယ်..
Women: ဘာ..ဒီလောက် နီးနီးလေးကို အသုံးဖြုန်းမကြီးစမ်းပါနဲ့ ရှင်ရယ်..
Men: ကောင်းပြီလေ.. လမ်းလျှောက်ပြီပဲ ပြန်ကြတာပေါ့.. ပတ်ဝန်းကျင်ကို ခံစားလို့ရတာပဲ..
Women: ကျမ ဗိုက်ဆာနေပြီ..လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဘူး ရှင့်...
Men: ဟင်..ဒါဖြင့်..ဘာလုပ်ချင်သလဲ ပြောလေ..?
Men: ညစာ အရင် စားကြမလားဟင်.?
Men: ဘာစားချင်လဲ ပြောကြည့်လေ..?
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:17 am
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်အိပ်ရာထနောက်ကျလို့ အဝတ်အစား သပ်သပ်ရပ်ရပ် မဝတ်သေးဘဲ ကပျာကယာ အိမ်ပေါ်ထပ်က ပြေးဆင်းခဲ့တယ်။ တက္ကစီတစ်စီး လှမ်းတားလိုက်ချိန် အပေါ်ထပ်ကနေ အဝတ်ဘီရိုတစ်လုံး ပြုတ်ကျလာတယ်။ အဲဒီမှာ ကျွန်တော်သေသွားခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က ကျွန်တော်ခရီးကနေ အချိန်စောပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ပြန်လာတာကို အံ့သြဝမ်းသာအောင်ဆိုပြီး ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကျွန်တော်ကြိုမပြောခဲ့ဘူး။ အိမ်ရောက်တော့ အိပ်ခန်းထဲကနေ ယောက်ျားအသံတစ်သံကြားလို့ အခန်းထဲ ကျွန်တော်ပြေးဝင်သွားတယ်။ ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကိုလှမ်းကြည့်တော့ အဝတ်အစား မသပ်မရပ်နဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် လှမ်းမြင်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်တိုတိုနဲ့ အဝတ်ဘီရိုယူပြီး အဲဒီလူပေါ် ပစ်ချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေကြောင်းကြံလိုက်တယ်။
ကျွန်တော်က အပြစ်မဲ့ပါ။ အသစ်တွေ့တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ ကျွန်တော်ကြည်နူးနေတုန်း သူ့ယောက်ျား ပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ ရုတ်တရက်မို့ ကြံရာမရတာနဲ့ အဝတ်ဘီရိုထဲ ကျွန်တော်ဝင်ပုန်းနေခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ "ဝုန်း" ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ကျွန်တော်သေသွားခဲ့တာပါပဲ။
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:18 am
လမိုက်ည တစ်ညမှာ သူခိုးတစ်ယောက် ဘဏ်တစ်ခုထဲဝင်ပြီး ပစ္စည်းခိုးဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့တယ်။ သူခိုးက ဘဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ အာမခံသေတ္တာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖွင့်ကြည့်ခဲ့တယ်။ ပထမသေတ္တာကို ဖွင့်ကြည့်တော့ ဘာအဖိုးတန်ပစ္စည်းမှာ မတွေ့ဘဲ ဂျယ်လီထုပ်တွေပဲ တွေ့ခဲ့တယ်။ နောက်သေတ္တာတစ်ခုကို ဖွင့်ကြည့်တော့လည်း ဘာမှမတွေ့ဘဲ ဂျယ်လီထုပ်ပဲတွေ့ခဲ့တယ်။ သူခိုးကစိတ်တိုပြီး ဂျယ်လီထုပ်တွေကို စားပစ်လိုက်တယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာ သူခိုးက အိပ်ရာစောစောထပြီး ညက သူလုပ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသိချင်လို့ သတင်းစာတစ်စောင် ဝယ်ဖတ်လိုက်တယ်။ သတင်းစာရဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာ စာလုံးကြီးနဲ့ ရေးထားတာကိုဖတ်ပြီး သူခိုးမေ့လဲသွားခဲ့တယ်။ သတင်းစာပေါ် ရေးထားတာက...
"ရူးသွပ်နေသော သူခိုးတစ်ယောက် သုတ်လှူဘဏ်တစ်ခုကို ညက ဝင်ရောက်ခိုးခဲ့သည်"
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:28 am
တစ်ပတ်အကြာ တိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာက ပြန်လာပြီးနောက် မှူးမတ်တွေကိုခေါ်ပြီး ဘုရင်ကြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ မှူးမတ်အားလုံးကို အဝတ်ချွတ်ပြီး ဘုရင်ကြီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်။ မှူးမတ်တိုင်းရဲ့ private နေရာက ပြတ်နေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးကျန်တဲ့ မှူးမတ်တစ်ယောက်တည်း အကောင်းပကတိ ဖြစ်တာကိုတွေ့တော့ ရှင်ဘုရင်က သစ္စာရှိတဲ့မှူးမတ်၊ ယုံကြည်ရတဲ့မှူးမတ်ဆိုပြီး ဆုချီးမြှင့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ မှူးမတ်ကို အလိုရှိရာတောင်းဆိုဖို့ ဘုရင်က ပြောပေမယ့် မှူးမတ်က ဘာမှမပြောခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံး ဘာဖြစ်လို့ မတောင်းဆိုတာလဲလို့ ဘုရင်က စိတ်မရှည်စွာနဲ့မေးမှ မှူးမတ်က စကားပြောဖို့ ပါးစပ်ဟလိုက်တယ်။
အဲဒီမှာ မှူးမတ်ပါးစပ်ထဲကလျှာ တစ်ဝက်ပြတ်နေတာကို ဘုရင်ကြီးတွေ့လိုက်တယ်။
ဟဲဟဲဟဲ လျှာနဲ့ကလိရင်းနဲ့ မြန်မာဆိုဒ်ကကိုကိုတွေလဲ အဘာဘာနဲ့ အော်နေရဦးမယ်နော်...
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:30 am
တစ်ညနေမှာ မိသားစုတစ်စု ထမင်းဝိုင်းဖွဲ့စားနေခဲ့တယ်။ ထမင်းဝိုင်းမှာ သားက ဝက်အူချောင်းကြော်ကို လက်ညှိုးထိုးပြီး "နိုင်ငံခြားမှာ စက်တစ်မျိုးထီထွင်လိုက်ပြီလို့ သိရတယ်။ အဲဒီစက်က ဘယ်လောက်ထိ ခေတ်မီသလဲဆို ဒီဖက်ကနေ ဝက်အရှင်တစ်ကောင် ထည့်လိုက်ရင် စက်ဟိုဖက်မှာ ဝက်အူချောင်းတွေ ထွက်ကျလာရောတဲ့... တကယ်လို့ ဒီဖက်ကနေ ဝက်အူချောင်းထည့်လိုက်လို့ ဟိုဖက်ကဝက်အရှင် ပြန်ထွက်လာရင် ပိုမိုက်မယ်လို့ သားထင်တယ်"
အဲဒီမှာ အဖေဖြစ်သူက ဝင်ဟန့်လိုက်တယ်။
"ဒါဘာများဆန်းသလဲ! နင့်အမေက ရယ်ဒီမိတ်စက်ပဲလေ။ ငါဒီဖက်ကနေ ဝက်အူချောင်းထည့်လိုက်တာ ငတုံးငအ ဝက်တစ်ကောင် မင်းထွက်လာခဲ့ပြီမဟုတ်လား"
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:32 am
နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခကြီးတစ်ဦးဟာ သူ့ရဲ့ သုတေသနလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် တပည့်တစ်ချို့နဲ့အတူ ကျေးရွာတစ်ရွာကို လေ့လာရေးခရီးထွက်ခဲ့သတဲ့။ ရွာရဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို ပါမောက္ခကြီးဟာ စနစ်တကျ လေ့လာတယ်။ မှတ်သားတယ်။ မေးမြန်းတယ်။
မွေးမြူရေးသမားတစ်ဦးနဲ့ ဆွေးနွေးနေစဉ်မှာ မွေးမြူရေးသမားက သူမွေးထားတဲ့ နို့စားနွားမတွေ လွှတ်ကျောင်းထားတာကို ကြည့်ပြီး...
"ဟို စာဥဆိုတဲ့ ကောင်မ ဘယ်သွားဦးမှာလဲ?"
"တိမ်ပြာဆိုတဲ့ ဟာမကလည်း ဟိုဘက်ခြံစည်းရိုးတိုင်ကို သွားပွတ်နေပြန်ပြီ"
"ဟဲ့ ဖြူ မြက်ကောင်းကောင်းမစားဘဲ ဘာဖြစ်လို့ တခြားကောင်မတွေကို လိုက်ဝှေ့နေတာလဲ" စသည်ဖြင့် လှမ်းလှမ်းပြီး မြည်တွန်တောက်တီးနေတယ်။ ပါမောက္ခက လယ်သမားကို အံ့သြတကြီး ကြည့်ပြီး....
"ခင်ဗျားက ခင်ဗျားနွားမတွေအားလုံး နာမည်မှတ်မိတာပဲလား" လို့ မေးလိုက်တယ်။
"မှတ်မိတာပေါ့ ဆရာကြီးရယ်။ သူတို့နာမည်မှတ်မိမှ သူတို့ကို ထိန်းရလွယ်တာ"
"တော်တယ်ဗျာ၊ ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်တပည့်မတွေ နာမည်ကို မမှတ်မိပါဘူး"
ဒီအခါမှာ မွေးမြူရေးသမားရဲ့ ဇနီးက ဝင်ပြောတယ်။ သူမရဲ့ ပြောစကားကြောင့် ပါမောက္ခကြီးရဲ့ ဘေးက ကျောင်းသားတွေ ပြုံးစိစိ ဖြစ်သွားကြသတဲ့။
မိန်းမကြီး ပြောတာက ဒီလိုလေ...
"ဆရာကြီးက ဘယ်မှတ်မိမလဲ၊ ကျွန်မယောက်ျားလို တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် နို့မှ မညှစ်ရဘဲ"
ကဲကဲ မြန်မာsex ဆိုဒ်က ကိုကိုတွေ မှတ်မိတယ်နော် တစ်နေ့၂ကြိမ်တဲ့...
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:40 am
ဒါက သင်္ဘောသားရုံးမှာ တုန်းက ကွန်ဒုံးသုံးဖို့လာရှင်းပြတဲ့ ဆရာဝန်မလေး ပြောပြတဲ့ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ။
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း တောရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေက မြို့သားတွေထက် ဗဟုသုတနည်းပါးကြတယ်။ စာတတ်တဲ့လူတွေလည်း သိပ်မရှိကြဘူး။ သူတို့က စာသာမတတ်တာ ကလေးမွေးတာတော့ တော်ကြတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ယောက် မှန်မှန်မွေးကြတယ်။ ဒါနဲ့ ကျန်းမာရေးဌာနက တောင်ပေါ်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကို (အခါ၊ လားဟူ၊ ရှမ်း) သားဆက်ခြားနည်း ဗဟုသုတပေးဖို့ ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ မိန်းမ၊ ယောက်ျားတွေကို လူစုခွဲပြီး ငွေကုန်ကြေးကျနည်း၊ ခွဲစိတ်ဖို့လည်း မလို၊ ဆေးသောက်ဖို့လည်း မလိုတဲ့ ကွန်ဒုံးသုံးနည်းကိုသုံးဖို့ ပညာပေး သရုပ်ပြခဲ့ကြတယ်။ သရုပ်ပြတဲ့နေရာမှာ မော်ဒယ်လ်အရုပ်တွေ မပါခဲ့တာကြောင့် လက်ညှိုးထောင်ပြီး ဒီလိုစွပ်ပါ၊ ဒီလိုသုံးပါလို့ ပြပေးခဲ့တယ်။
ဗဟုသုတနည်းသူတွေကို အရိပ်အမြွက်ပြရုံနဲ့တင် မလုံလောက်နိုင်မှန်း ၂နှစ် ၃နှစ်ကြာမှ ကျန်းမာရေးဌာနက လူတွေသိခဲ့ရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ၂နှစ် ၃ နှစ်ကြာတော့ သူတို့ပညာပေးခဲ့တဲ့ သားဆက်ခြားနည်း ဘယ်လောက် တိုးတက်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာကို စစ်ဆေးဖို့ တောင်ပေါ်ရွာကို ကျန်းမာရေးဌာနက လူတွေ ရောက်သွားခဲ့ကြပြန်တယ်။ ရွာထဲဝင်တာနဲ့ ပြေးလွှားကစားနေကြတဲ့ ပုစုခရုလေးတွေ၊ ကျောပေါ်ပိုးထားကြတဲ့ ကလေးတွေ ပိုများလာတာကို တွေ့လိုက်တယ်။
ဒါနဲ့ ယောကျာ်း၊ မိန်းမတွေကို လူစုခွဲပြီး သူတို့ပြောသလို ကွန်ဒုံးမသုံးကြဘူးလားလို့ မေးတော့ “သုံးတယ်.. ခင်ဗျားတို့ ဆေးက မစွမ်းဘူး” လို့ ယောက်ျားတွေက ပြန်ဖြေကြတယ်။ ဘယ်လိုသုံးလို့ မစွမ်းသလဲဆိုတော့ အားလုံးပြန်ဖြေလိုက်တာက... “ခင်ဗျားတို့ လုပ်ပြသလို မိန်းမနဲ့အိပ်တဲ့အချိန် ကျွန်တော်တို့ လက်ညှိုးမှာ စွပ်ထားကြတယ်လေ” တဲ့။
ကျန်းမာရေးဌာနကလူတွေ ငိုအားထက် ရယ်အားသန်ခဲ့ရတယ်။ နောက်မှ သစ်သားတုံးကို ယောက်ျားအင်္ဂါပုံစံ လုပ်ပြီး သရုပ်ပြခဲ့ရတယ်။
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:47 am
ဒီတစ်ပုဒ်က တရုတ်လို အင်တာနက်မှာ ဖတ်ဖူးတာပါ။
တစ်ခါက ရှဉ့်တစ်ကောင်နဲ့ ဖားတစ်ကောင်ဟာ မိန်းမရွှင်နဲ့ ပျော်ပါးဖို့ တည်းခိုခန်းတစ်ခုကို ရောက်သွားခဲ့ကြတယ်။ တည်းခိုခန်းက ဘေးချင်းကပ်ရက်အခန်းမှာ နေကြပြီး မိန်းမရွှင်နဲ့ ပျော်ပါးတော့တယ်။ အဲဒီမှာ ဖားအခန်းကနေ “ အီး.. အီး.. အား.. အား” အသံတွေ တစ်ညလုံး ကြားနေရတယ်။ မနက်လင်းတော့ ရှဉ့်က ဖားကို “ကိုရွှေဖား ... ခင်ဗျား ကိုယ်ခံအား ကောင်းလှချည်လား၊ တစ်ညလုံး မနားခဲ့ဘူး” လို့ အားကျတဲ့အသံနဲ့မေးတော့ ဖားက စိတ်ပျက်ပျက် ပြန်ဖြေလိုက်တာက “ ဘယ်ကလာ ကိုယ်ခံအားကောင်းမလဲ.. ကြိုးစားပြီး ခုန်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ညလုံး ကုတင်ပေါ် ကျွန်တော် မရောက်ခဲ့ဘူးဗျ” ဟူတည်း။
kaunglay on Fri Apr 01, 2011 12:49 am
တစ်ခါက ပန်းခြံတစ်ခုမှာ ယောက်ျားရုပ်တုနဲ့ မိန်းမရုပ်တု နှစ်ခုရှိသတဲ့။ ရုပ်တုနှစ်တုကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တည်ထားတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ တစ်နေ့မှာ အချစ်နတ်သား မြှားနတ်မောင်ဟာ ရုပ်တုနှစ်ခုကို တွေ့သွားပြီး “မင်းတို့နှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီး ငေးမောကြည့်နေရတာ နှစ်ပေါင်းမနည်းတော့ဘူး။ မင်းတို့ကို သနားလို့ ဒီနေ့တော့ မင်းတို့နှစ်ယောက်ကို ၁၅မိနစ်လောက် ငါအသက်သွင်းပေးလိုက်မယ်။ ကြိုက်တာ လုပ်တော့..... ” လို့ ပြောပြီး လူအဖြစ် အသက်သွင်းပေးလိုက်တယ်။
အသက်ဝင်သွားတဲ့ ရုပ်တုနှစ်ခုဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ရပ်နေရတဲ့ အမြင့်ကနေ ဝမ်းသာအားရ ခုန်ချပြီး ချုံတစ်ခုထဲ ပြေးဝင်သွားကြတယ်။ ၁ဝမိနစ်အကြာမှ ချုံထဲက ပြန်ထွက်လာတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို မြှားနတ်မောင်က “ အချိန်၅မိနစ် ကျန်သေးတယ်.. ကြိုက်တာ လုပ်ကြဦး” လို့ ပြောတော့ နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ပြုံးကြည့်ပြီး ချုံထဲ နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်ပြေးဝင်သွားကြတယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ချုံထဲကနေ မိန်းကလေးအသံကို ကြားလိုက်ရတယ်။ မိန်းကလေး ပြောလိုက်တာက....
“ကဲ... ဒီတစ်ခါ ရှင့်အလှည့်.. ခိုကို ကျွန်မချုပ်ထားပေးမယ်။ ခိုခေါင်းပေါ် ရှင်မစင်စွန့်ချလိုက်တော့” ဟူတည်း။
Myanmar Sex on Fri Apr 01, 2011 2:16 am
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာရှိတယ်တဲ့။အဲဒီရွာသူကြီးမှာ သမီးတစ်ယောက်ရှိတယ်။
အဲဒါရွာမှာ ထူးခြားတဲ့ထုံးစံတစ်ခုရှိတယ်။ရွာကိုလာတဲ့သူတိုင်း တကိုယ်လုံးချွတ်လာရမယ်တဲ့
ပြီးတော့ ရွာသူကြီးရဲ့သမီကိုမြင်ရင် ယောက်ျားလေးတွေက အငယ်ကောင် မနိုးရဘူးတဲ့ဗျာ
နိုးလာရင် သူကြီးသမီးက သတ်မယ်လို့ အမိန့်ထုတ်ထားတယ်။
တနေ့မှာပေါ့ ရွာကို သားအဖနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်။ အဖေဖြစ်သူက သားကို
သတိပေးတယ်။ "ငါ့သား သူကြီးသမီးကိုတွေ့ရင် မင်းအငယ်ကောင်မနိုးစေနဲ့နော်"
အဲဒါနဲ့သူကြီးကိုသွားတွေ့တာပေါ့။ သားဖြစ်သူက သူကြီးသမီးကို မြင်ရော
စိတ်ဘယ်လိုထိန်းထိန်းမရတော့ဘူဗျာ။ အငယ်ကောင်နိုးလာပါနေရော။ သူကြီးသမီးလဲမြင်ေ၇ာ
သတ်မယ်ပေါ့ ခေါ်ခဲ့စမ်းပေါ့။ အဖေဖြစ်သူကလဲ တောင်းပန်ပါတာပေါ့ ဒါပေမယ့်မ၇ဘူး
၁၀ မိနစ် ၁၅ မိနစ်လောက်လဲကြာရော သားဖြစ်သူပြန်ထွက်လာတယ်
ပြန်ေ၇ာက်တော့ အဖေဖြစ်သူက မေးတယ် မင်းမသေဘူးလားတဲ့
သားဖြစ်သူက "သေတယ်လေ သူက အငယ်ကောင်ကိုသတ်လိုက်တာ"
"အဲဒါမျိုးသတ်မယ်ဆိုလို့ကတော့ ၁၀ ခါလောက်တောင် အသေခံရဲတယ်တဲ့"
မြန်မာဆက်စ် အဖွဲ့သားတွေလဲ အသတ်ခံရဲတယ်မလား
Myanmar Sex on Fri Apr 01, 2011 2:27 am
လူသားတွေကို ဗြဟ္မာကြီးလေးဦးက မြေကြီးတွေနဲ့ပုံဖော်ခဲ့တယ်လို့ကြားဖူးတယ်
အဲဒါကို ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က အပြောင်အပျက်ပြောထားတာပါ
ပုံစံတူနှစ်ယောက်ပေါ့ သူတို့က လူတွေကို ရွံ့နဲ့ ဖန်းဆင်းကျတယ် ပြီးမှ အသက်သွင်းတာပေါ့
အဲဒီမှာ ပထမ တစ်ယောက်ကို ထုစစ်တဲ့နေရာမှာ ရွံ့နည်းနည်းပိုသွားတယ်
နောက်တစ်ယောက်ထုစစ်တဲ့နေရာမှာ ရွံ့လိုသွားတာပေါ့ဗျာ အဲဒီတော့အပေါက်ကြီးဖြစ်နေတယ်
အဲဒါနဲ့ဖြစ်လာရော ရွံ့ပိုသွားတဲ့လူကို ယောက်ျားတဲ့ ရွံ့လိုပြီး အပေါက်ကြီးနဲ့လူကို မိန်းမတဲ့
မိန်းမတွေအပေါက်ဖြစ်နေတာ ရွံ့လိုသွားလို့တဲ့နော် မှတ်ထား မြန်မာဆက်စ် အဖွဲ့သားတို့
Myanmar Sex on Sat Apr 02, 2011 1:28 am
kaunglay on Sat Apr 02, 2011 10:08 am
မနီသည် အတန်းထဲတွင် အမြဲအိပ်ငိုက် လေ့ ရှိ သည်။ တစ်နေ့ မနီအိပ်ပျော်နေစဉ်
မနီ အိပ်အိုက်နေသဖြင့် မကြားသော်ကြောင့် သူမ နောက် တွင် ထိုင်နေ သော ကိုဖြိုးမှ ဘော့ပင်နှင့် ထိုး၍ သ တိ ပေးလိုက် သည်။ ထိုအခါ
မနီ။ ။" ဘုရားသခင်" ( လန့်သွား သဖြင့် ရောင်၍ အော်လိုက်သည၊် ထို့နောက် သူမ
ပြန်လည် အိပ် ပျော်သွား ပြန်သည်)။
မနီ။ ။ (လန့်သွားပြန် သဖြင့် ရောင်၍ ထအော်ပြန်သည်၊ ထို့နောက် တဖန်အိပ်ပျော်ပြန်လေသည် ) " ဂျီးဆပ် ခရစ်"
မနီ။ ။ နောက်တစ် ခါ ငါ့ ကို ထပ် ထိုး ရဲ ထိုးကြည့် ၊ နင့် ဟာ ကို ထက်ပိုင်းချိုးပစ်မယ်
kaunglay on Sat Apr 02, 2011 10:18 am
ယောက်ျားက မိန်းမကို တောင်းဆိုတယ်...
မိန်းမရေ... ငါ့ကိုတစ်ချိန်ထဲမှာ... ပျော်၇ွင်သွားစေမယ့်... စိတ်ညစ်သွားစေမယ့်... စကားတစ်ခွန်းပြောပြပါလားဟင်း...
ရှင့်ညီရဲ့လီးထက် ရှင်လီးက ပိုကြီးတယ်.... ဟူသတည်း...
kaunglay on Sat Apr 02, 2011 10:25 am
ကောင်မလေး... အရမ်းကြပ်လွန်းတယ် ကိုယ်ရယ်...
ကောင်လေး.... မစိုးရိမ်ပါနဲ့... ကိုယ်ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ့မယ်...
ကောင်လေး... အား... ငါလုပ်လို့မရဘူး...
ကောင်လေး... အတတ်နိုင်ဘူး... ထားလိုက်တော့...
ငါတို့ ဒီလက်စွပ်ကို ပြန်လည်းလိုက်တော့မယ်...
(ဟဲဟဲဟဲ အထင်မလွဲပါနဲ့ လက်ထပ်လက်စွပ်စမ်းစွပ်နေတာပါ...)
kaunglay on Sat Apr 02, 2011 10:35 am
ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ဥာဏ်စမ်းလိုက်တယ်...
“အရှည်က ၆ လက်မလောက်ရှိတယ်...
ပါးစပ်ထဲမှာ အဖြူတွေထွက်တဲ့အထိ အသွင်းအထုတ်လုပ်တယ်.. အဲဒါဘာလဲ ကဲဖြေ...”
ကောင်မလေးက “ရှင်တော်တော်မိုက်ရိုင်းတာပဲ... အဲဒါကျမသိတယ်... ဒါပေမဲ့ မဖြေချင်ဘူး...”
ကောင်လေးက “စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ... ငါပြောတာက သွားတိုက်သပွတ်တံနဲ့ သွားတိုက်တာပါကွာ...”တဲ့...
kaunglay on Sat Apr 02, 2011 10:44 am
ယောက်ျားဟာ တစ်နေကုန် အလုပ်သွားပြီး မိန်းမက အိမ်မှာပဲ တစ်နေကုန်နေရတယ်တဲ့။
တစ်နေ့မှာတော့ ယောက်ျားက စဉ်းစားသတဲ့..
"အင်း. ငါကတော့ တစ်နေကုန် ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်ရတယ်..ငါ့မိန်းမကတော့ တစ်နေကုန်အိမ်မှာပဲ ထိုင်နေတယ်.. မတရားလိုက်တာနော်.. " ဆိုပြီးတွေးမိသတဲ့။
ဒါနဲ့ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးကျတော့ ဘုရားရှေ့မှာဆုတောင်းရော..
"အရှင်ဘုရား.. တပည့်တော်ကတော့ တစ်နေကုန်အလုပ်သွားပြီး တပည့်တော်ရဲ့မိန်းမကတော့ အိမ်မှာပဲထိုင်နေတယ်ဘုရာ့... မတရားပါဘူး... ဒါကြောင့် တပည့်တော်နဲ့ တပည့်တော်ရဲ့ မိန်းမကို နေရာချင်းလဲပေးပါဘုရာ့.." ဆိုပြီး ဆုတောင်းသတဲ့။
အဲ့ဒါနဲ့ ထူးဆန်းစွာပဲ နောက်တစ်နေ့မှာ ယောက်ျားက မိန်းမဖြစ်ပြီး မိန်းမက ယောက်ျားအဖြစ် ပြောင်းသွားသတဲ့။
ဒီလိုနဲ့ အဲ့ဒီဘ၀ပြောင်းပြောင်းချင်းနေ့မှာပဲ မိန်းမ(ယခင်ကယောက်ျား)က နံနက်ကို အစောကြီးထရပြီး မိသားစုအတွက် ထမင်းချိုင့်ထည့်... ယောက်ျားအလုပ်သွားပြန်တော့လည်း အိမ်မှာ အ၀တ်လျှော်၊ မီးပူတိုက်၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်၊ ကလေးတွေကို ကျောင်းပို့ ကျောင်းကြို၊ ယောက်ျားအလုပ်က ပြန်လာတော့လည်း ညစာချက်၊ ကလေးတွေကို ထမင်းကျွေး၊ ယောက်ျားကိုပြုစု၊ ညအိပ်ရာဝင်တဲ့အချိန်မှာလည်း ယောက်ျားပြုသမျှ နုရသတဲ့။
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီညမှာပဲ မိန်းမ(ယခင်ကယောက်ျား)က ဘုရားရှေ့မှာ ဆုတောင်းပြန်သတဲ့..
"အရှင်ဘုရား..တပည့်တော်ရဲ့ အမိုက်အမှားကို ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ...
တပည့်တော်အရင်က နားမလည်လို့ပါ... အခုတော့ နားလည်သွားပါပြီ... မိန်းမတွေက ယောက်ျားတွေထက် ပိုပြီးတော့ ပင်ပန်းပါတယ်ဘုရာ့... ဒါကြောင့် တပည့်တော်ကို ယောက်ျားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းပေးတော်မူပါဘုရာ့.."
အဲ့ဒီအခါမှာတော့ ဘုရားက ဘာပြောလဲဆိုတော့
"အခုလို အမြင်မှန်ရသွားတဲ့အတွက် ငါဘုရား ၀မ်းသာတော်မူတယ်...
ဒါပေမယ့်မင်းမိန်းမအဖြစ်ပြောင်းဖို့ နောက် ၉လ စောင့်ရမယ်.."
"မင်းမှာ မင်းယောက်ျား(ယခင်က မိန်းမ)ပြုသမျှကို နုထားတဲ့အတွက် မင်းမှာကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီ.."